Gongs & SkinsGongs & SkinsGongs & Skins - INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE | INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE
Gongs & SkinsGongs & SkinsGongs & Skins
Home » Past events » Gongs & SkinsGongs & SkinsGongs & Skins
Gongs & Skins, festival de percussions
Concert (à Rangoun)
31.07.2015, 18.30 pm
Tickets en libre service à l’Institut français – Goethe Institute (340 Pyay road)
Réservation en ligne : ticket@yangon.goethe.org
La percussion comme instrument de rencontre et de collaboration artistique entre des musiciens européens et birmans. Projet de coopération culturelle franco-allemande en Birmanie, GONGS AND SKINS proposera, à la suite d’une semaine d’ateliers, quatre concerts en Birmanie pendant lesquels les musiciens apprendront à se connaître, découvrir leurs instruments respectifs et se produire ensemble, sous la direction du musicologue et percussionniste Bernhard Wulff. Le projet convoquera l’ensemble traditionnel de percussions de l’ethnie majoritaire bama mais également ceux d’autres ethnies birmanes.
TOURNEE GONGS & SKINS 2015
31.07.2015 | 18h30
Concert au Théâtre National de Rangoun
03.08.2015 | 19h
04.08.2015 | 18h
03.08. Concert à Aythaya
06.08.2015 | 18h
ဗုံတူရိယာနှင့်ပတ်သက်သောရိုးရာဓလေ့ထူးထူးကဲကဲကြွယ်ဝမှုသည် အရှေ့တောင်အာရှ၏ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍ မရသောရတနာသိုက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤထူးခြားသိသာထင်ရှားသည့် ဗုံတူရိယာအသွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကို မြန်မာကသူ့ကိုယ်ပိုင် ထင်ရှားခြားနားသည့် အပိုင်းကဏ္ဍအနေဖြင့် ပေါင်းစပ်ထည့်ပေးပါသည်။ မူရင်းကျသည့်ဖန်တီးမှုပါသော တေးဂီတဖွဲ့ဆိုသီကုံးမှု၊တူရိယာပစ္စည်းတို့နှင့်အတူထိုင်းနိုင်ငံသာမကအင်ဒိုနီးရှား၏ ရိုးရာဓလေ့များဖြင့်ပင် အလွယ်တကူယှဉ်နိုင်ပါသည်။ ပြည့်စုံကြွယ်ဝစေသောအခြေခံအကြောင်းမှာနိုင်ငံအတွင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများထွေပြားများမြောင်စွာရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးတို့၏ ဆိုင်းဝိုင်းနှင့် ဒိုးပတ် ရိုးရာဓလေ့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသောတူရိယာများ၊ မတူကွဲပြားသောလူမျိုးနွယ်စုတို့၏နရီစည်းဝါးများဖြင့် ပြည့်စုံသွားစေသည်။
ဤသို့ အရေးကြီးသည့် ဗုံတူရိယာပုံစံထွေပြားများမြောင်မှုရှိနေသော်လည်းပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံမှု ကင်းမဲ့ ခြင်းကြောင့် ရိုးရာအစဉ်အလာသက်သက် ပေါင်းစုမှုသာဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်ရှိနေပါသည်။ ဤအချက်မှာGongs & Skins ၏စဉ်းစားပုံနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤရှေ့ဆောင်ကြိုးပမ်းမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမတူကွဲပြားသောတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ၊ ပြင်သစ် နှင့် ဂျာမနီ နိုင်ငံများထံမှ ဗုံတူရိယာပညာရှင်များကိုအတူတကွ စုစည်းခေါ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဂျာမန် ဗုံတူရိယာအနုပညာရှင်နှင့် ကျွမ်းကျင်သူပါမောက္ခ Bernhard Wulff ၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် နိုင်ငံတကာတေးဂီတပညာရှင်များသည် တပတ်ကြာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌အတူတကွအလုပ်လုပ် ကြပါမည်။ ရန်ကုန်၊တောင်ကြီးနှင့် မန္တလေးတို့တွင် တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အတူတင်ဆက်ပြသမှုများကိုလည်းပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။